Kedu ihe bụ Platform Management Asset Management (DAM)? | Martech Zone
Kedu ihe bụ Platform Management Asset Management (DAM)?
Tọzdee, Eprel 7, 2022 Tọzdee, Eprel 7, 2022 Nicolás Jiménez
Njikwa akụ dijitalụ (DAM) nwere ọrụ njikwa na mkpebi ndị gbara gburugburu ntinye, nkọwapụta, katalọgụ, nchekwa, iweghachi na nkesa nke akụ dijitalụ. Foto dijitalụ, ihe ngosi, vidiyo, na egwu na-egosipụta mpaghara ebumnuche nke njikwa ego mgbasa ozi (udi udi nke DAM).
Gịnị bụ Digital Asset Management?
Njikwa akụrụngwa dijitalụ DAM bụ omume nke ijikwa, ịhazi na ikesa faịlụ mgbasa ozi. Ngwa DAM na-enyere ndị nrụpụta aka ịmepụta ọba akwụkwọ foto, vidiyo, eserese, PDFs, ndebiri na ọdịnaya dijitalụ ndị ọzọ enwere ike ịchọ ma dị njikere ibugharị.
A sị ka e kwuwe, ụlọ ọrụ na-amalite ịzụ ahịa gburugburu maka ngwanrọ DAM mgbe ọ chọpụtara na, nke mbụ, ọ nwere ọtụtụ ihe (gụọ "olu a na-apụghị ịchịkwa") nke akụ dijitalụ na nke abụọ, ime ihe banyere nnukwu ọbá akwụkwọ akụ dijitalụ na-ewekwa oke. ọtụtụ oge na-enyeghị uru zuru oke. Nke a bụ eziokwu n'ofe ụlọ ọrụ dị iche iche gụnyere agụmakwụkwọ ka elu, mgbasa ozi, nrụpụta, ntụrụndụ, enweghị uru, nlekọta ahụike, na teknụzụ ọgwụ.
Nkọwa nke Platform njikwa akụrụngwa dijitalụ Widen
Ụdị Nnyefe DAM
Gbasaawanye nso nso a wepụtara ezigbo akwụkwọ ọcha na-akọwa ọdịiche (na overlaps) n'etiti SaaS vs. Hosted vs. Hybrid vs. Open Source DAM ngwọta. Nke a bụ ezigbo akụrụngwa iji lelee ma ị na-amalite inyocha nhọrọ DAM gị.
Atụmatụ njikwa akụ dijitalụ
Dị ka a ga - asị na ụdị dị iche iche dị na ụdị nnyefe ezughị oke, enwerekwa ọtụtụ atụmatụ etinyere n'ebe ahụ. Ụfọdụ ndị na-ere ahịa DAM dị mma karịa ndị ọzọ n'ịhụ na ha kacha mma iji gboo mkpa gị pụrụ iche tupu ị na-agbalị ire gị na usoro ha, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka ị banye na ichu nta DAM gị na nkọwa zuru ezu nke ihe achọrọ dị ka o kwere mee.
Otu n'ime ọganihu dị mkpa na teknụzụ DAM bụ ikike ha ijikọ ọnụ na nhazi nhazi na mbipụta bụ isi - ọtụtụ ndị nwere usoro nkwado zuru oke. Nke ahụ pụtara na onye nrụpụta gị nwere ike chepụta eserese, nweta nzaghachi site n'aka ndị otu, mee ndezi, wee kwanye onyonyo kachasị mma ozugbo na sistemụ njikwa ọdịnaya gị.
Ọbụna nke ka mma: kewaa mkpa gị ka ọ bụrụ nke dị mkpa na nke mara mma ịnwe. I kwesịkwara idetu atụmatụ ọ bụla dị mkpa n'ihi ụkpụrụ, iwu, ma ọ bụ iwu ndị ọzọ na-achịkwa ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị.
Ihe niile a na-eme bụ hụ na ị dịghị ejedebe na ole na ole atụmatụ na ị na-enweghị ike melite arụmọrụ nke gị workflows dị ka o kwere mee ma ọ bụ ọtụtụ atụmatụ na ị na-ahụ onwe gị na-akwụ ụgwọ maka mgbịrịgba na whistles ị ga-mgbe mkpa. ma ọ bụ chọrọ iji.
Uru nke Platform Management Asset Digital
Iche echiche banyere uru nke imejuputa a sistemụ njikwa akụ dijitalụ n'usoro nke ịcha ụgwọ or ịchekwa oge naanị ezughi oke. Ọ naghị abanye n'ime obi ka DAM nwere ike isi metụta nzukọ na akụrụngwa gị.
Kama, chee echiche banyere DAM na usoro nke ịgbapụta. Anyị na-ejikarị okwu ahụ na-ezo aka n'ụzọ DAM software na-enye aka ma na-edozi nkwụghachi nke akụ dijitalụ nke onye ọ bụla, ma (mgbe ejiri ya mee ihe ziri ezi) ọ nwere ike inwe otu mmetụta ahụ na ọrụ, dollar na talent.
Were onye mmebe. Ya ma ọ bụ ya nwere ike nọrọ ugbu a 10 n'ime awa 40 ọ bụla n'ịchọ ihe bara uru, ọrụ njikwa ụdị, na idebe ụlọ ọba akwụkwọ onyonyo. Ịtọlite ​​DAM na iwepụ mkpa maka ihe niile agaghị apụta na ị ga-egbutu oge onye nrụpụta gị. Ihe ọ pụtara bụ na enwere ike itinye awa ọrụ na-adịghị arụ ọrụ nke na-abaghị uru ugbu a iji gosipụta ike nke onye mmebe nwere: imewe. Otu ihe ahụ na-aga maka ndị na-ere ahịa gị, ndị otu ahịa, wdg.
Okwu Azụmaahịa maka Njikwa Akụ Ahịa
Widen ebipụtala eserese dị omimi nke na-agafe gị ikpe azụmaahịa maka itinye ego na nyiwe njikwa akụrụngwa dijitalụ.
Tags: ihe e kere ekenkesa akụnjikwa arịa mmụta egonjikarịcha akụrụngwaatụmatụ akụnchekwa akụuru nke damcontent Marketingdamdam infographicnjikwa ihe onwunwe dijitalụdijitalụ akụ management ikpo okwuemail Marketinginfographicnjikwa ego mgbasa ozigini bu damkedu ihe bụ usoro njikwa akụ dijitalụgbasaagbasaa ihe onwunwe
Kedu ihe bụ Infographic? Kedu uru dị na Strategy Infographic?
Otu esi ebipụta nri blọọgụ Shopify gị n'ụdị email Klaviyo gị